Semalt Expert Anoziva Nzira Yokubvisa Referral Spam Kubva kuGoogle Analytics
Referral spam inoramba ichitsvaga pasinei neGoogle ichipa sarudzo yepamutemo. Izvo zvinoshandiswa zvinotarisa kushandiswa kwemashoko akadai anosanganisira kusagadziriswa, pasina-video-tool, keywords-kutarisa-kubudirira uye nzvimbo-checker. Zvisinei, kutora zita remusikana firitsi ndiyo mhinduro yakanakisisa iyo inofanirwa kuongororwa musati mimwe nzira - best windows hosting in canada.
Saka, Ivan Konovalov, Mutungamiri Wekubudirira Kwemutengi we Semalt , anosimbisa munyaya ino nengozi dzekutumira zvinyorwa uye kuti vashandisi vanogona sei kutarisana nehukama hwakadaro.
Maererano nedzimwe nyanzvi dzezveterevhizheni, kutumira spam ndiyo chiito chekutumira nzira yekutengesa kune chigadzirwa kana nzvimbo. Izvi zvingaita sokuti hazvina maturo, asi zviri kutendeukira kuhutachiona hwekutengesa.
Mhando dzekuregererwa kwepamu
Muchirevo cheGoogle Analytics, pane miviri mikuru yekutumira spam: mweya uye spammy web crawlers.
Spammy crawlers mabheroti anoshanyira nzvimbo nechinangwa chekunyora zvinyorwa. Vazhinji vese vanotsvaga webhusaiti vanoshandisa mazita ewebservers. Nokudaro ivo vakasiyiwa kunze kwemashoko ekuongorora. Kunyange zvakadaro, vamwe vanokanganisa spammy havaoneki semabhobhoti, saka vanozoguma muGoogle analytics nhepfenyuro sezvikamu ne 0-seconds murefu uye 100% bounce rate. Munguva ichangopfuura, Google yakatanga imwe shandiswa inoshandiswa kufuta kunze inozivikanwa sevangadzi uye bots kunyange zvazvo isina kukwana.
Ghost kutumira motokari ndiyo inonyanya kukosha pane kutumira spam mbiri.Iyo spam haina kushanyira nzvimbo. Pane kudaro, vese vanotsvaga vanoshandisa pfungwa yokuti Google analytics inotumira data kuburikidza nekukumbira kweHTTP zvakananga kumaseji eGoogle analytics iyo inoreva kuti muchengeti anogona nyore "kuputika" muchikamu. Uyezve, kuendesa kweMweya kunokonzerwa nezvirongwa zvinotumira zvikumbiro zveHTTP zvisiri izvo zvinotarisa zvimwe zveGoogle analytics zvinhu zvokuti nzvimbo haigoni kufamba nemugwagwa.Zvino, nyanzvi dzinochengetedza kuti mweya inoshandiswa mu spoofing zviratidzo zvekutsvaga kwehupenyu pamwe nekutumira zviitiko zvenhema.
Nzira Dzakashata dzekufuratira Spam
Referral spam inokanganisa ruzivo rwewebhu web analytics yewebsite. I "masangano" anopinda kuburikidza nekutsanangurira spam skew ruzivo kuburikidza nekuputika kwehuwandu hwemigwagwa uye kutenderera kwekubatana kwemaserikiti. Vashandi vasingazivi spam vanogona kutora zvisarudzo pane data isina kururama nekushayikwa kwemotokari.
Pane zvakawanda zvingasarudzwa zvekubvisa kutumira spam mukati meGoogle analytics.
Futa Spammy Crawlers uye Usabvisa kunze kune dzimwe nyika Hostnames
Zvizhinji zvekutumira zvinoratidzwa nezvisina kururama mazita ekugamuchirwa. Semuenzaniso, paunongororedza Google analytics rekutsvaga deta, ghost referrals aripo mazita ekunyanya asingabatsiri paiti. Nokudaro, ruzivo urwu runobatsira vadzidzisi vepanzvimbo kuti vagadzire mafiritsi anobvumira mashoko nevakarurama mazita. Uyezve, iyi sarudzo inonyanya kukosha kune vashandisi veGoogle vanoshandisa mazita mashoma. Mune dzimwe nguva nzvimbo inoshandiswa zita rekuremekedza resaiti yakwana. Mune nyaya dzakawanda domains, mazwi anowanzofanira kuongororwa neRegex Pal. Iko rudzi rwefaira rinogona kubvisa chero rudzi rwemweya yekutsvaga motokari. Rimwe firiji, zvisinei, rinodikanwa kuti ribvise vashandisi vewebhu nokuti vanoshanyira webhusaiti uye vanorondedzera vakarurama mazita.
Shandisa zvose Zvinyorwa zvekutsvaga Spam
Inoshandiswa mumamiriro ezvinhu apo nzvimbo dzinoshandura nyore nyore mune maonero akaenzana. Iyo firiti inofanira kuva yakazara zvakakwana kufambisa zvose zvinokanganisa kutumira mawebsite.